Ndingakwazi njani ukulawula i-SEO ye-Local ngeGoogle?
Khumbula ezo ntsuku ezindala, xa ufumana phantse yonke ibhizinisi lendawo ukuya phezulu kwi-Google Local Search Engine Result Pages (SERPs) ezisetyenziselwa ukuba yiqhekeza lekhekhe? Ewe, ngokungathí sina, sinokunyuka ngaphandle kwezicwangciso eziyinkimbinkimbi kwaye ziyinkimbinkimbi ngoku sinyanzeliswa ukuba sijongane nazo. Uninzi lwabanikazi bezoshishino kwi-intanethi banokulawula izikhundla zabo zokusesha kwiindawo zeGoogle zeziphumo kuphela emva kwezinyathelo ezikhawulezayo nezilula. Yonke into ababeyifuna ukuba bahlale phezulu kwi-SEO yocingo yendawo yayiyinkqubo engakholeki - corbatas azules. Emva kokuba unesakhiwo sewebhusayithi esakhelwe kakuhle, wafumana amaphepha akho abhalwe kwi-Google directory, kunye nakwezinye izihlomelo zecatshuthi-isinyathelo sokugqibela ukuzalisekisa umkhankaso wakho we-SEO wendawo ngokugqibeleleyo wawubiza ukuba iphepha lakho liyaziwa njengeGoogle yam Yoshishino. Ngaloo ndlela, wonke umntu unokugqithiswa ngesimo esiphakamileyo kunoma ziphi na izicelo eziphendulela kwiziphumo zengingqi zeGoogle zombuzo wenkcazelo yangundoqo, umzekelo, into enjenge-"contractor" e Texas. "
Namhlanje kusenza ndidideke ukuba into enjalo elula kwaye elula yokucinga yendawo ye-SEO ayikho into eqhelekileyo. Masibhekane nalo - ngoku sijongene nommandla ophandle kwaye uphendukela kwiindawo ezikhoyo. Ngoko sinokuyenza ntoni? Akukho nto kodwa uzame ukuzivumelanisa nale nyaniso enje, efunekayo ngoku zonke iinkalo zoPhando lweeNjini zoKhenketho, ngaphandle kwecandelo elikhankanywe ngokubhekiselele kwi-SEO yendawo. Ngoko, masizame ukulungelelanisa kwimithetho emitsha yemidlalo kwaye senze konke okusemandleni ethu ukunqoba umncintiswano. Okokuqala, ndincoma ukuba ndikhangele phantsi apho iimeko ziye zahlengahlengiswa kwaye zifuna ukunakekelwa kwethu ngqo phambi kwayo nayiphi na into.
Ukhuphiswano olongezelelweyo oluninzi lwengingqi
Akukho mfuneko yokuthetha ukuba ngokukhawuleza ihamba njani kwimfazwe yangempela kwiimarike zendawo. Kwaye imeko engamelanga ingamangalisi nantoni na, njengoko inxaxheba yengonyama yabanini-mveliso be-intanethi ibona ukubaluleka kwe-SEO yophando lwengingqi ukugqibelela izinto ezisisiseko kunye nokuqhubela phambili ekusebenzeni kwelizwe, okanye kwimpumelelo yomhlaba wonke.
I-Google Ibhizinisi lam liyimfuneko, njengokuba njalo
Ukugcina ubungqina bayo bokuqala, i-Google Bhizinisi Lwam isanda kunikwa ligxininisa ngakumbi. Uluhlu lwangaphambili lwesigxina sokukhangela alufumananga nje ubunzima besisindo, kodwa ngoku ngokubambisana ngokubambisana kunye nazo zonke izihlomelo kunye neenkcazo eziye zagqithisa ngakumbi. Ngoku bafuna ukuba usebenze ngokuphindaphindiweyo ukuba uqaphele ngokucophelela zonke iinkcukacha zedatha yakho edwelisiweyo, ekufuneka ihlanganiswe ngokusemandleni, kunye nokudibanisa kunye.
Musa ukulibala ukufumana iimpendulo ezingaphezulu kwi-intanethi
Uphando lweendawo lwangoku.Akunjalo nje ngokuba ukuhlaziywa kwakho okuhle kwi-intanethi kubonisa igalelo elinamandla kakhulu ukuqhuba iwebhusayithi yakho phezulu kwi-SEO ye-local search, kodwa ngenxa yokuba inombolo eyodwa ebandayo-ukuhlolwa okulungileyo kuqikelelwa ukunikezela kwi-CTR ukuya kuma-22%.Emva koko, ukuhlaziywa kwe-intanethi kusekho isisombululo esinamandla sokubandakanya abathengi abatsha abangakumbi kwi-shishini lakho, kwaye usenokusebenza kakuhle ngokuphuhlisa abalandeli bakho ngoku. Yingakho ukuhlaziywa kwekhwalithi ye-intanethi ngoku ikhetheke ngakumbi, ngoko akufanele ubenakho ukuyihoxisa.